Raw Dehydronandrolon poda Vagadziri & Vanotengesa - Fakita
Raw Dehydronandrolon powder ishizha rinoshanda rinounza hutano hwakanaka, hunogara kwenguva refu. Izvi ndezvikonzero zvehafu yakareba-yehupenyu hwechirwere (kumativi ose e8 mazuva). Vashandi vanotaura nezvemigumisiro yenyoro, uye ine simba guru rekuita kuchengetedza mvura.
Raw Dehydronandrolon powder (2590-41-2) Tsanangudzo
Raw Dehydronandrolon powder ndiyo chinhu chinokosha chekushandiswa kwe (faslodex) uye, apo iyo yekare yaiva mushonga unorwisa-mucheche wekenza wakagadzirwa neA AstraZeneca Company uye iyo yekupedzisira yaiva yakagadzirwa steroid inoshambadzirwa neOganon Company nokuda kwekunyanya kunetseka. Iyo ikamu inoshanda inobereka hutano hwakanaka, hurefu hunogara hunobuda mumasumbu. Izvi ndezvikonzero zvehafu yakareba yehupenyu hwechirwere. Vashandi vanotaura nezvemigumisiro yenyoro, uye ine simba guru rekuita kuchengetedza mvura.
Kemikari Name 6-Dehydronandrolone acetate; 2590-41-2;Dehydronandrolon; Estra-4,6-dien-3-one 2590-41-2
Molecular Wsere 314.425 g / mol
Kunyorera Point -80 ° C
Birara Point 457.4 ° C pa 760 mmHg
Skukodzera 17 g / L (20 ° C)
APane Raw Dehydronandrolon powder ishizha rinoshanda rinounza hutano hwakanaka, hunogara kwenguva refu. Izvi ndezvikonzero zvehafu yakareba-yehupenyu hwechirwere (kumativi ose e8 mazuva). Vashandi vanotaura nezvemigumisiro yenyoro, uye ine simba guru rekuita kuchengetedza mvura.